Khilaafka Shariif iyo Gaas oo sii xoogeysanaya kadib markii�. Soomaalinews.com 16 Aug 12, 05:07
Gudaha Magaalada Muqdisho waxaa ku sugan masuuliyiin farabadan oo qaar dowladihii sooomaray dalka kasoo noqday madax, Aqoonyahno, Madaxa ugu sareysa haatan dalaka iyo waliba masuuliyiin kale oo dhamaantood shaaciyeen in ey yihiin musharixiin u taagan xilka madaxtinimda Dalka Soomaaliya.
Xiligii loogu tala galay in laqabto Doorada madaxtinimda Dalka Soomaaliya waaxaa kaharsan wax kayar shan maalmood weli lama magacaabin Dudiga Doorashooyinka Dalka Soomaaliya xitaa waxaa weli lasoo xulin baarlamaankii dooran lahaa madaxweynah cusub ee uu yeelanayo dalka.
Waxaa intaasi oo idil siidheer waxaa jira qilaaf xoogan oo haatan sookala dhex galay madaxda ugu sareysa Dalka waa Madwaxweynaha dowlada Soomaaliya Shariif Shiiq Axmed iyo Ra,isal wasaaraha Xukumada KMG ee Soomaaliya Dr Cabduwali Maxamed Cali Gaas qilaaf kooda ayaa wax uu u muuqdaa mid cirka isku siishareeraya.
Waxaana uu kadhashay qilaaf kooda sida lasheegay shirkii ugu danbeeyay oo ey lixda saxiixayaasha ku yeesheen Magaalada Neeroobi ee Dalka Kenya oo ey kamid yihiin labada masuul taasi oo aheed in Madaxweynah uu san ku qanacsaneed in Ra,isal wasaare Gaas uu isku sootaago xilka madax tinimda Dalka Soomaaliya iyadoona uu ugu danbeentii Ra,isal wasaare Gaas uu ku dhawaaqay in uu yahay musharax u taagan xilka madax tinimda Dalka Soomaaliya taasna waxa ey ladhisay ayaa la sheegay in uu soo kala dhex galo labada masuul qilaaf kii ugu xooganaa.
Madaxweynaha dowlada Soomaaliya Shariif Shiiq Axmed ayaa Dalka dib ugu soolaabtay shalay shirjaraa,id oo uu ku qabtay xarunta Madaxtooyada ee Villa Soomaaliya ayaa waxa uu ku sheegay in eysan Golaha Wasiirada eysan kahor imaankarin Go,aanda iyo Digreetooyinka uu soosaaro waxa uu intaa raaciyay hadalkiisa in Ra,isal wasaare Gaas uu haatan yahay musharax u taagan xilka madaxtinimada Soomaaliya sida uu sheegay Xukumadana qaraar eysan soosaari Karin.
Mamuuqdaan wax waan waan ah oo ey Beesha Caalamka ka dhaex wado qilaafka haatan sookala dhex galay madaxdda ugu sareysa Dalka soomaaaliya maadaama waqtiga harsan uu yahay mid yar.
Hadaba maxuu kudan been doonaa qaliifka haatan kadhex taagan Madaxweynaha Soomaaliya Shariif Shiiq Axmed iyo Ra,isal wasaare Gaas waxaa arintaa ka waramay Aqoonyahan C/rixmaan Daqare oo ka mid ah Aqoon yahana Soomaaliyeed waxa uu sheegay in qilaaf kaan uu yahay mid looga dhuminaayo waqtiga Shacabka Soomaaliyeed eyna tahay wax laga xumaado in waqtigaaan uu qilaaf soogala dhex gaalo madaaxda dowlada waxa uu sheegay hadii uu sidaan ku sii socda in si awood ah lagu xalin doono.
Waxa uu tilmaamay in qilaafkaan dib u dhac ey kuyeelan karto Doorashooyinka xilka madax tinimda maadaama uu sheegay in dhexdooda ey san oolin wax wada shaqeen ah.
Waxa uu ugu danbeentii sheegay hadii ey sidaan wax u siisocdaan in waqti dheeri ah lagu dari doona si loosoo idleeyo Baarlamaanka Cusub iyo in ladhiso gudiga doorashooyinka.
Shacabka Soomaaliyeed iyo Beesha Caalamkaba waxa ey indhaha ku haayan sida ey haatan wax u socdaan waxana laga dhursugayaa sida ey ku soo idlaadaan arimahaan oo idil.